Warbixin : Waxa Kabaro Seddexda(3) Wadan Ee Aduunka Ugu Awooda Badan Xaga Ciidanka Iyo Qarasha Ku Baxo Sanadkan 2016. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Dhacdooyinka » Warbixin : Waxa Kabaro Seddexda(3) Wadan Ee Aduunka Ugu Awooda Badan Xaga Ciidanka Iyo Qarasha Ku Baxo Sanadkan 2016.
Warbixin : Waxa Kabaro Seddexda(3) Wadan Ee Aduunka Ugu Awooda Badan Xaga Ciidanka Iyo Qarasha Ku Baxo Sanadkan 2016.
Waxaa Qoray: Abdishakur Geesey /////////// Taariikh: 30-08-16 6:10 PM Halkaan kaga bogo warbixin xiiso badan oo ku aadan seddexda dal ee dunida ugu quwada badan marka loo eego dunida inteeda kale, waa hubaal in ad warbixintan ka baro doonto waxyaabo badan oo mugdi kaaga jiray. In la ogaado tirada ciidan dal uu leeyahay ma’ahan waxa sahlan sidaasi darteed waxan idin so gudbinaa sefka kala horenta wadamada quwan aduun sanadkan 2016.
1. United State Of America.
Wadanka Mareykan ka magaalo madaxdiisu waa Washington, D.C, waxaa uu kuyaal qaarada America ka waxaa uu noqoday wadanka kowaad ee dunida ugu awooda badan dhinaca ciidanka malatariga marka loo eego dunida inteeda kale taas waxay ka dhigantahay in uu USA ay tahay quwada kowaad ee sanadkan 2016.
Tirada ciidanka mareykan ka hada shaqeyneyso waxaa ay gaarayan 1,477,896 oo askari. Guud ahana ciidan mareykan marka la isku daro kuwa shaqeeya iyo kuwa an shaqeyn nin tira ahaan waxaay garayaan 153,600,000 oo askari, sido kale Budget ama qarashka ku tala galka ciidanka difaaca dalka mareykan waxaa lagu sheegay aduun lacageed oo dhan $689,591,000,000 oo dolar. sidaasi waxay ku noqdeen dalka mareykan ka ciidanka ugu awooda badan wadama aduumka wadanka kowaad.
Mascow waa caasimada dalka ruushka, waa dalka ugu weyn dunida waxaa uu katirsan yahay qaarada Europe ama Yurub. waxaa uu ku fadhiyaa dul badkiisa uu dhan yahay celcelis ahaan 17,098,242km, waxaa uu noqday wadanka labaad ee dunida ugu awooda badan dhinaca ciidanka.
Tirada ciidanka dalka ruushka inta hada shaqeyso waxaay gaarayaan tiro dhan 1,200,000 oo askari. Guud ahaan tirada ciidanka dalk ruush marka la isku geeyo kuwa keydka iyo kuwa shaqeeyo waxay gaarayaan 75,330,000 oo askari, sido kale Budget ama lacagaha ku baxa ciidankasi waxay gaareysaa lacag dhan $64,000,000,000 oo dolar.
The Country Of China ama dalka china waa dal weyn waxaa uu kuyaal qaarada Asiya. caasimadiisu waa magaalada Beijing, tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan ‎1,343,239,923 oo ruux. sido kale dalkaan waxaa uu noqday dalkii sedexaad ee dunida ugu awooda badan xaga ciidanka.
Guud ahaan tirada ciidan xooga dalka china waa 795,500,000 oo askari, lakiin marka laga reebo kuwa keydka kuwa hada shaqeeyo waxay gaarayaan tir ahaan 2,285,000 oo askari, Sido kale Budget ama ama qarashka ku baxa ciidanka dalkaasi waxa lagu sheegay lacag dhan $129,272,000,000 oo dolar.